गृहमन्त्री शर्माले अ.स.ई. बनाए बम फाल्ने प्रहरी हवल्दार रानालाई - Khabar Samachar
Home / राष्ट्रिय खबर / गृहमन्त्री शर्माले अ.स.ई. बनाए बम फाल्ने प्रहरी हवल्दार रानालाई
July 18, 2017	राष्ट्रिय खबर 142 Views
काठमाडौं । बमलाई जोखिम मोलेर हातैमा समाई फाल्ने प्रहरी हवल्दारलाई दूर्गाबहादुर रानालाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले असईमा बढुवा गर्ने भएका छन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने नीतिअनुसार नै आफूले रानालाई हवल्दारबाट असईमा बढुवा गर्न लागेको खुलासा गरेका छन् ।
प्रहरी हवल्दार रानाले दोस्रो चरण निर्वाचनको क्रममा दाङको तुल्सीपुरस्थित अम्वास मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी प्रहार भएको बम हातमै समाएर फालेका थिए । उनको साहसी कामका कारण ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचेको थियो ।
गृहमन्त्री शर्माले आफ्ना लागि प्रहरी प्रशासनमा कोही हाम्रा नभएको भन्दै राम्रा छान्ने र जनताको सेवामा प्रहरी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाए । गृहमन्त्रीले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई तीन महिनाभित्रै कारबाही गर्ने नीति आफ्नो भएको बताए । News24
Previous कपाल के कारणले गर्दा झर्छ र झर्न नदिन के गर्ने ?
Next २६ वर्षीय गोविन्द बलामी र चार वर्षीया रितिशा बलामी आइतबार राति एउटै प्लास्टिकको डोरी घाँटीमा बाँधेर झुन्डिएका हुन् ।